Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD. - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD.
09-5190787, 09-30233381, 09-5040104, Website
အင်းစိန် သင်္ဃန်းကျွန်း သာကေတ တောင်ဥက္ကလာ
About Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD.
Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD. ၏ စီမံကိန်းအသစ်များ
Pyone Pan Wai Construciton Co.,Ltd မှ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် တည်ဆောက်သော ငမိုးရိပ် (၉)လမ်းမှ တိုက်ခန်းများ
Advertised by Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD.
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး7,313
Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD. | apartment အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
Advertiser : Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD.
09-5190787, 09-30233381, 09-5040104
Pyone Pan Wai Construction Co.,LTD. ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် - ပြုံပန်းဝေ Construction Co.,Ltd မှမြင်သာ(၂)လမ်းတွင် တည်ဆောက်သော တိုက်ခန်းအသစ်
Advertised by Kyaw…
ပြုံပန်းဝေ Construction Co.,Ltd မှမြင်သာ(၂)လမ်းတွင် တည်ဆောက်သော တိုက်ခန်းအသစ်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	690 သိန်း
ရောင်းရန် - ဘုရင့်နောင် (၁၂)လမ်းတွင် ပြုံပန်းဝေ Construction Co.,Ltd မှ BCC နှင့် မီတာကျပြီး အသင့်နေနိုင်သော တိုက်ခန်းအသစ်များ
ဘုရင့်နောင် (၁၂)လမ်းတွင် ပြုံပန်းဝေ Construction Co.,Ltd မှ BCC နှင့် မီတာကျပြီး အသင့်နေနိုင်သော တိုက်ခန်းအသစ်များ
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	380 သိန်း
ရောင်းရန် - ပြုံပန်းဝေ Construction Co.,Ltd မှအောင်ဇေကျ (၇)လမ်းတွင် တည်ဆောက်သော တိုက်ခန်းအသစ်
ပြုံပန်းဝေ Construction Co.,Ltd မှအောင်ဇေကျ (၇)လမ်းတွင် တည်ဆောက်သော တိုက်ခန်းအသစ်
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	870 သိန်း
ရောင်းရန် - အောင်ဇေယ (၇) လမ်း တွင်တိုက်သစ်ရောင်းမည်
အောင်ဇေယ (၇) လမ်း တွင်တိုက်သစ်ရောင်းမည်
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	280 သိန်း
ရောင်းရန် - အမှတ်(၉၄၃) ယသဝတီလမ်းကျယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ တွင်တိုက်သစ်ရောင်းမည်
အမှတ်(၉၄၃) ယသဝတီလမ်းကျယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ တွင်တိုက်သစ်ရောင်းမည်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	410 သိန်း
ရောင်းရန် - အမှတ်(၉၄၃) ယသဝတီလမ်းကျယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ
အမှတ်(၉၄၃) ယသဝတီလမ်းကျယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	990 သိန်း
ရောင်းရန် - နဝရတ်လမ်းကျယ်တွင် တိုက်သစ်ဒုတိယထပ်ရောင်းမည်
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	380 သိန်း
ရောင်းရန် - ပထမထပ် ဘယ်
ဧရိယာ : 541 sqft